पासवर्ड भएको मान्छेको आकस्मिक मृत्युले पौने २२ अर्ब रुपैयाँ अलपत्र ! - Everest Dainik - News from Nepal
पासवर्ड भएको मान्छेको आकस्मिक मृत्युले पौने २२ अर्ब रुपैयाँ अलपत्र !
काठमाडौँ । कहिलेकाँही चलचित्रको जस्ता घटनाक्रम वास्तविक जीवनमा पनि हुन पुग्छन् । यस्तै घटना भर्खर सुनिन आएको छ जुन सुन्दा कुनै चलचित्रको कथा जस्तै लाग्छ । अर्बौं रुपैयाँ संचित छ र त्यसलाई एउटा पासवर्डले सुरक्षित राखिएको छ जुन एकजनासँग मात्र रहेको छ । ती मान्छे विदेश घुम्न निस्किन्छन् र त्यहाँ उनको मृत्यु हुन पुग्छ ।
क्यानाडाका ३० वर्षीय गेराल्ड कटन २०१८ मा भारत भ्रमणमा आएका थिए जहाँ आन्द्रासम्बन्धी रोगका कारण उनको मृत्यु हुनपुग्यो । उनको मृत्युपछि १९ करोड डलर अर्थात २१ अर्ब ७५ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको क्रिप्टोकरेंसी ‘लक’ भएको छ किनभने यसको पासवर्ड कटनसँग मात्रै थियो । उनकी पत्नीलाई समेत उक्त पासवर्ड थाहा नभएकाले ठुल्ठुला कम्प्युटर सुरक्षाविज्ञ समेतले उक्त क्रिप्टोकरेंसी ‘अनलक’ गर्न सकिराखेका छैनन् ।
कम्प्युटर नै छ इन्क्रिप्टेड
गेराल्ड कटनको कम्पनीको नाम क्वाड्रिगासिएक्स हो । कम्पनीले सामाजिक संजाल पेजमार्फत भारत भ्रमणका दौरान रोग बल्झेर गेराल्डको मृत्यु भएको जनाएको छ । उनी भारतमा एउटा अनाथालय खोल्न गैरहेका थिए ।
गेराल्डको मृत्युपछि उनकी पत्नी जेनिफर रोबर्टसन् र उनको कम्पनीले क्यानाडाको एउटा अदालतमा निक्षेप सुरक्षणको निम्ति अपिल दायर गरेपछि उनको मृत्युको खबर सार्वजनिक भएको थियो । उक्त अपिलमा गेराल्डको ‘इन्क्रिप्टेड’ बैंक खातामा उनको सम्पत्ति रहेको र त्यो खाता आफूले ‘अनलक’ गर्न नसकिरहेको भनिएको छ । अपिलमा भनी अनुसार गेराल्ड जुन ल्यापटपबाट बैंक खातासम्बन्धी काम गर्ने गर्दथे त्यो ‘इन्क्रिप्टेड’ रहेको छ । र त्यसको पासवर्ड अनलक गर्न उनकी पत्नी र कम्पनी लगायत थुप्रै कम्युटर विज्ञहरू समेत असमर्थ रहेको जनाइएको छ ।
फसेको पैसा झिक्ने उपाय खोजिंदै
गत जनवरी ३१, २०१८ मा क्वाड्रिगासिएक्सले आफ्नो वेबसाइटको माध्यमले नोभा स्कटिया सर्वोच्च अदालतमा कम्पनीको आर्थिक समस्या हाल गर्न आफूहरूले उक्त खातामा रहेको रकम प्रयोग गर्ने अनुमति पाउनुपर्ने जिकिर रहेको छ । कम्पनीले भनेको छ, ‘पछिल्ला केही हप्ताहरूमा हामीले कम्पनीको आर्थिक अवस्था सुधार्न निकै कोशिस गरेका छौं । हामीले क्रिप्टोकरंसी खाताबारे पत्ता लगाउने कोशिस समेत गरेका छौं तर त्यसमा सफलता हात लाग्न सकेको छैन । हामीले आफ्ना ग्राहकहरूको निक्षेप अनुसार रकम दिनुपर्ने छ तर हामीले उक्त खाताको पासवर्ड थाहा पाउन नसकेका कारण हामी यसो गर्न असमर्थ छौं ।’
सामाजिक संजालमा प्रश्न उठाइँदै
सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताहरूले भने यस घटनामा निकै शंकाउपशंका गर्न थालेका छन् । धेरैले यो धोखाधडीको मामिला हुनसक्ने समेत बताएका छन् । धेरैले भनेका छन्, ‘यदि गेराल्डलाई आन्द्रासम्बन्धी त्यस्तो गम्भीर रोग थियो भने उनी भारत किन गए । त्यहाँ त पिउने पानी समेत राम्रो पाइंदैन ?’
कतिपय सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताले गेराल्ड भारत गएको कुनै प्रमाण नै नभएको समेत भनेका छन् । एक जनाले त गेराल्डको मृत्यु भारतको जयपुरमा कतै भएको भन्ने कुरा उनको साथीले बताएको भन्दै व्यंग गरेका छन् ।